जिससद्धारा ३५ जनालाई निशुल्क लोकसेवा कक्षा | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
जिससद्धारा ३५ जनालाई निशुल्क लोकसेवा कक्षा
Published On : १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १५:४०
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले ३५ जना महिलालाई निशुल्क लोकसेवा कक्षा पढाएको छ । महिलाहरुलाई सरकारी जागिरमा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले संचालित कक्षा बिहिवार सकिएको छ । १५ दिन सम्म चलेको कक्षामा गोरखा स्थित बिभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरु, अधिकृत लगायतका कर्मचारीले बिहानी सत्रमा पढाएका थिए ।
लोकसेवाको कसरी तयारी गर्ने ? भन्ने बारे सहभागीलाई जानकारी गराइएको जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त प्रमुख बिजयराज वाग्लेले बताए । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेका महिलाहरुलाई शसक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले कक्षा संचालन गरिएको जिससले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्र्तगत खरिदार वा सो सरहको कक्षा संचालन भएको हो ।